နှင်းဆီဆိုတာ ဆူးရှိမှ...ဆူးဆိုတာ နှင်းဆီရဲ့မာန.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့မာနတော့ ထားသင့်တယ်မဟုတ်လား...ဆူးကို မြတ်နိုးတဲ့နှင်းဆီလိုပဲ.. ရှိသင့်တဲ့မာနကို တန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝက နှင်းဆီတစ်ပွင့် အကြောင်းပဲပေါ့.....
ဆယ်တန်းပြီးစ နွေရာသီ ကြိုက်တာကို ကြိုက်သလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ရချိန်မှာ .. ငယ် အပျော်ဆုံးက အင်္ဂလိပ်သီချင်းခွေတွေ စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရခြင်းပါ။ ဆယ်တန်းပြီးတဲ့ နွေရာသီမှ မေမေက Sony Walkmanလေး ဝယ်ပေးပါတယ်။ သီချင်းတွေ အရမ်းကြိုက်တဲ့သူ့သမီးကို စာမှာ စိတ်ဝင်စားမှုပေါ့သွားမှာစိုးလုိ့ ဆယ်တန်းမပြီးမချင်း သီချင်းခွေတွေ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ခွင့် မပေးသလို ငယ် အရမ်းလိုချင်တဲ့ Walkmanလေးလည်း ဝယ်မပေးပါ။ ကိုယ်အရမ်းနှစ်သက်တဲ့သီချင်းတွေ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် နားထောင်ခွင့်ရချိန်မှာ အားရပါးရ ဝယ်ထားတဲ့ ခွေတွေထဲမှာ J Lo ရဲ့ On The6အခွေလည်းအပါအဝင်ပေါ့။ အဲ့ထဲမှာမှ ဘာတွေဆိုနေမှန်းသိဖို့မပြောနဲ့ ဘာဘာသာစကားနဲ့မှန်းတောင် မသိပဲ ဆိုနေတဲ့ စုံတွဲသီချင်းကို lyrics စာရွက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ စာသားတွေနဲ့ သူတို့ဆိုသံတွေကို တိုက်ပြီး အလွတ်လိုက်ကျက်ထားမိတဲ့ သီချင်းက Marc Anthony နဲ့ Jennifer Lopez ရဲ့ No me Ames ပါ။ ဘယ်လောက်ထိများအဲ့သီချင်းကို ရူးသွပ်မိခဲ့သလဲဆို .. မရ အရ လိုက်ကျက် .. နားထောင်မိတိုင်း မျက်ရည်လည်ခဲ့ရလောက်အောင် ရူးသွပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် ဘာတွေဆိုထားမှန်း သိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေတာကလည်း ရန်ကုန်မှာမဟုတ် ငယ်ဆယ်တန်းပြီးစအချိန် ၂၀၀၁ လောက်တုန်းကလည်း အင်တာနက်က အဲ့လောက်ခေတ်စားသေးတာမဟုတ်တော့ အဲ့သီချင်းရဲ့ ဘာသာပြန်ကို ဘယ်လိုရှာရှာ ရှာလို့မရခဲ့ပါဘူး။
ကဲ .. ခုတော့ ….
No Me Ames (Don’t Love Me)
ဆို - Marc Anthony + Jennifer Lopez
ဘာသာပြန်ခံစား - Marzo Love
B :နင့် အသံက ကွဲအက်အက်ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ..
G :အထီးကျန်နေလို့ပါ ..
B :ဘာလို့ ငါ့လက်ကို အဲ့လောက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ထားတာလဲ..
နင် ဘာတွေများ တွေးနေတာလဲ ..
G :ငါ နင့်ကို အရမ်းချစ်တယ် ..
G :ခေါင်းမမာချင်စမ်းနဲ့ … ငါ့ကို သံသယမဝင်စမ်းပါနဲ့ .. အနာဂတ်က ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် .. ငါမကြောက်ဘူး။
ငါနင့်ကို ချစ်ခွင့်ရနေချင်ရုံလေးပါ …။
B :ငါ့ကိုမချစ်နဲ့.. နင်တွေးထားတာနဲ့ ငါနဲ့က တခြားစီ …
G :နင်တွေးတာကရော မှန်တယ်ထင်နေလား… ငါတို့နှစ်ယောက် အချိန်တွေကို အတူတူ ဖြတ်ကျော်ကြစို့လေ..
B :ငါ့ကိုမချစ်စမ်းပါနဲ့ .. အလိမ်အညာဆိုတာ ငါသိပြီးသား …
G :နင့်အချစ်နဲ့ ငါနဲ့မတန်ဘူးလို့ နင်ထင်ရင် .. ရတယ် … ငါ့ကိုမချစ်နဲ့ .. ငါကတော့ နင့်နားကမခွာဘူး ..။
B :ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဟာ … ငါကလမ်းပျောက်နေပြီ .. ငါတို့ကမ္ဘာက ငါ့ကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီ .. အဲ့တာ ငါ့ ကံကြမ္မာပဲ .. ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်လို့ပါ … ။
ငါတို့နှစ်ယောက်က မှန်ရဲ့ အရိပ်တွေလိုပဲ .. (လက်တွေ့မှာမတွေ့ဆုံနိုင်ပေမယ့်) တကယ်တော့ ငါတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်တည်းပါ …။
G :သေလုမျောပါးနောင်တတရားတွေနဲ့တော့ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့..။ ငါ့ကို ပြန်ပွေ့ဖက်ထားပေးရုံလောက်ပဲ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ .. ။ လက်တွဲပြီး အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားထိုးဖောက်ပျံသန်းနိုင်လောက်အောင် ငါတို့အချစ်က ထိုက်တန်ပြီးသားပါ …။
B :ဘာပြောရမှန်းကို ငါတကယ်မသိတော့တာပါ ….။
လူတွေက နင့်(စိတ်) ကို ထိခိုက်နာကျင် စေလိမ့်မယ်ကွယ် …
G :အခုချိန် နင်နဲ့ ငါနဲ့ ခွဲရမယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူနဲ့မှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး …
ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ငါ့ကို တယောက်တည်း မထားခဲ့ပါနဲ့ ..။
B :ငါ့ကို မထားခဲ့ပါနဲ့ … မထားခဲ့ပါနဲ့ .. ငါနင့်ကို မချစ်ဘူးလို့ပြောတိုင်း နားမထောင်ပါနဲ့ မယုံလိုက်ပါနဲ့ဟာ ..။
G :ငါ့ကို မထားခဲ့ပါနဲ့ … အဲ့ဒီမချစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ ငါ့အသည်းကို မခွဲပါနဲ့ ..။
B :ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့တော့ … ငါ့ကိုထားခဲ့လိုက်ပါတော့ .. ငါတောင်းပန်ပါတယ် ..။
G :ငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ နင်သိသားနဲ့ … ငါကတော့ အမြဲတမ်းချစ်နေမှာ …
B :ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဟာ … ငါ့ကနင့်ကို ဒုက္ခဖြစ်စေရုံသက်သက်ပဲ ငါ့နှလုံးသားက ဒီလိုနဲ့ပဲ အေးစက်ခဲ့ရပြီ ..
G :ဝမ်းနည်းမှုတွေကနေ ရှောင်ပြေးပြီး ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့..။ ငါနင့်ကို ချစ်နေလို့ နင်ငါ့ကို ပြန်ချစ်စေချင်ရုံလေးပါ ..
B :ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ .. တနေ့နေ့တော့ ငါတို့နှစ်ယောက် ထာဝရ မခွဲမခွာရှိနေနိုင်မှာပါ …။
G :ငါတို့ရဲ့ အချစ်က မုန်တိုင်းကြမ်းနောက်က နေရောင်လို .. ကြယ်စုတန်းတွေထဲက ကြယ်တံခွန်နှစ်စင်းလို..
~Marzo~ |03/11/2012 10:14 PM|
သီချင်းလေးကို ခံစားနားဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://www.youtube.com/watch?v=H1c08XN_APY
0 comments Labels: သီချင်းခံစားမှုအပိုင်းအစ
Vitas ရဲ့ အဆုံးမဲ့ အနမ်း (Pocelui)
ဒီသီချင်းကတော့ Vitas သီချင်းတွေထဲက ငယ် အကြိုက်ဆုံးသီချင်းပါ … ။ သူ့ကို Opera2နဲ့ စသိပြီး ဒီသီချင်းက ဒုတိယမြောက်သိတဲ့သီချင်းပါ ..။ ပထမဆုံးတခေါက်နားထောင်မိတဲ့ ညကတည်းက ဒီသီချင်းတပုဒ်တည်းဖွင့်ပြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရတဲ့သီချင်းပေါ့။ ဟိုတလောလေးကတင် သူ့အဖေအစစ် ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စ လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ကြတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အပြင် သူ့သီချင်းတွေထဲမှာ သူ့ဟန်ပန်တွေ သူ့အော်သံတွေကတဆင့် .. သူ့ရင်ထဲက ကြေကွဲမှုတွေကို ပိုပို နားလည် လာသလို ခံစားမိခဲ့တယ်။
အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဟန်ပန်နဲ့ ခပ်ထေ့ထေ့စတိုင် ပြုံးတတ်တဲ့ သူ့အပြုံးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က သူ့ရဲ့ ကြေကွဲမှု ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ဒီလို သီချင်းတွေ အော်သံတွေကနေ ဖွင့်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲ ငယ် နားလည်လိုက်မိတယ်။
Vitas ရေ … ရှင့်သီချင်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကပ်ပါလာတဲ့ ဘယ်သူမှမသိတဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းတွေကို ကျွန်မ မြင်နေရတယ်ဆိုတာ ……
ဆို - Vitas
မင်းဆီ ပေါင်းကူးထားတဲ့ တံတားတစ်စင်းပေါ့ …
မင်းကြားနိုင်မယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်ကွယ်… ။
မင်းအနားမှာ ရှိနေချင်လိုက်တာ …
ဘယ်ဆီမှာများလဲ ချစ်သူရယ် …။
စည်းတွေ အကွာအဝေးတွေက ကမ္ဘာတွေမက ဝေးလွန်းလှချည်လားကွယ် ..
ငါတို့ စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်ကြမယ် …။
အနမ်း … ငါ့အနမ်းတွေ မင်းဆီ ပျံသန်းလာနေပြီ ..
ကမ္ဘာဆုံးသည်အထိ .. ဒီဇင်ဘာရဲ့ နှင်းတွေနဲ့ အတူတူပေါ့ ..။
ဖမ်းဆုပ်လိုက်၊ သိမ်းထားလိုက်ပါ …
ငါ မင်းနားမှာ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ချစ်သူ။
အဆုံးမဲ့ အနမ်း …
ညကြီးမင်းကြီး သုံးနာရီ မှာတောင် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ငါ မင်းအနားရှိနေတယ် ချစ်သူ။
ငါတို့ စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်ကြမယ် … ချစ်သူ။
~Marzo~ |03/11/2012 3:01 AM|
သီချင်းလေးကို ခံစားချင်သူများအတွက် http://www.youtube.com/watch?v=NEuknOymlkQ&feature=related
Vitas ရဲ့ ကြယ်
ရုရှားအဆိုတော် Vitas ရဲ့ သီချင်းတွေကို (သီချင်းတွေဆိုတာထက် ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ သူ့ရဲ့ အသံကို) အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ opera2ဆိုတဲ့သီချင်းဟာ သူ့ရဲ့ အသံ ကြောင့် အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့် အဲ့သီချင်းထက် ပိုနှစ်သက်မိတာက Pocelui (A kiss as long as eternity) ဆိုတဲ့သီချင်းပါ။ တခွန်းမှ နားမလည်ပဲ သီချင်းကို နှစ်သက်လို့ ရတာ .. ခံစားလို့ရတာ .. ဂီတအနုပညာရဲ့ အစွမ်းက ဆန်းတော့ ဆန်းသား။ ဒါပေမယ့် ခုတလောတော့ Zvezda (The Star) ဆိုတဲ့သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်နေမိလို့ English လိုပြန်ပေးထားတဲ့ Lyrics တွေကို မရမက ရှာရင်း ဖတ်မိလိုက်ချိန်မှာတော့ တနေကုန် ဒီတပုဒ်တည်းကို repeat ထပ်ထားရလောက်အောင် ခံစားမိပါတော့တယ်။ လက်တလော ခံစားနေရတဲ့ .. ရည်မှန်းထားတဲ့ဆီ မရောက်နိုင်သေးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ရှိအခြေအနေမှာ အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တနေကုန် အဲ့သီချင်းတပုဒ်တည်းကို နားထောင်နေရင်း .. သူ့စာသားလေးတွေကို ငယ့် ခံစားချက်တွေနဲ့ ထုဆစ်ချင်လာတဲ့အခါမှာတော့ ……
(ဘာသာပြန်ခံစား - Marzo Love)
# အကြိမ်ပေါင်းများစွာ … ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်မေးမိချိန်
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါဆိုတာ ဘာအတွက် မွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့ရတာလဲ
တိမ်တွေကရော… ဘာလို့ လွင့်မျောရင်း မိုးစက်တွေအဖြစ် ကြွေဆင်းရသလဲ
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ငါ့ကိုယ်ငါအတွက် ဘာကိုမှ တခုတ်တရ မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။
တိမ်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပျံသန်းချင်ခဲ့ပေမယ့်.. ငါ့မှာ အတောင်ပံတွေမရှိခဲ့
ကြယ်တွေကတော့ ဟိုးအဝေးတနေရာကနေ ငါ့ကို ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်လို့ ကောင်းနေဆဲပေါ့။
ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ရည်မှန်းချက် ငါ့လက်ထဲမှာ ရှိနေပေမယ့်
ကြယ်တွေဆီကို ရောက်ဖို့တော့ သိပ်ကို ခက်ခဲလွန်းတယ်ကွယ်။
တချက်တည်းနဲ့သူ့ဆီ ရောက်အောင်သွားနိုင်ဖို့ .. ငါ့မှာအင်အားရှိပါ့မလားဆိုတာ .. ငါ မသိဘူး။
# ငါ့ခရီးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်အထိ အချိန်တစ်ခု ငါစောင့်မယ်။
ငါ့ကြယ်လေးရယ် … ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလောင်ကျွမ်းပစ်ပါနဲ့ကွာ
ငါ့အိပ်မက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေဆီ လမ်းပြပေးလှည့်ပါဦး …
ငါ့ကို စောင့်ပါဦး ….
# နောက်ထပ် လမ်းဘယ်နှစ်လမ်း ငါဆက်လျှောက်ရဦးမလဲ…
ငါ့ကိုယ်ငါ ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ ..နောက်ထပ် အခက်အခဲအတားဆီး ဘယ်နှစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ရဦးမလဲ
ကျလုကျခင် ချောက်ကမ်းပါးအစွန်းမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ငါ တောင့်ခံထားရဦးမလဲ
ဘယ်နှစ်ခါလောက် အသစ်ကနေ ပြန်ပြန် စ နေရမလဲကွယ် ..
~Marzo~ |02/11/2012 9:00PM|
သီချင်းလေးကို ခံစားနားဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ... http://www.youtube.com/watch?v=P9A1-fxd-hI
Ref (Wiki):Vitas (Russian: Витас), isaRussian singer- songwriter.Known for his high falsetto voice andavocal range of5octaves, he has been given the nickname "Prince of the Dolphin Voice" in China. His music is often difficult to categorize.
ရောင်စုံ လူများသို့ အဖြူရောင် အတွေး
လူတွေ ... ရောင်စုံလူတွေ ...
တချို့က ရဲရဲရင့်ရင့် နီကြတယ်။
တချို့ က လှလှပပ ဝါ လို့ကောင်းနေတုန်း
တချို့ ကျ ဖျော့တော့စွာ မှိုင်းနေကြတယ် ...။
တချို့ က ကျော့ကျော့မော့မော့လေး စိမ်းနေပြန်သလောက်
တချို့ ကျ အေးမြစွာ ပြာလွင်နေကြပြန်ရော .....။
တကယ်တော့ နီနေတာလည်း လူ ဝါနေတာလည်း လူ
စိမ်းနေလဲ လူ ... ပြာလွင်နေလည်း လူ ....
အုံ့ဆိုင်း မှုန်မှိုင်းနေပေမယ့် သူလည်း လူပါပဲ ...။
ယုံကြည်မှုက တခါတလေ အချင်းများစေတယ်။ အခင်အမင်ပျက်စေတယ်။ သွေးစွန်းနေ့တွေ ပေါ်ပေါက်စေတယ်။ မိသားစုတွေ ပြိုကွဲစေတယ်။ မိဘမဲ့တွေ ဒုက္ခိတတွေ တိုးပွားလာစေတယ်...။
ဒါပေမယ့်လည်း ယုံကြည်မှုဆိုတာ လိုအပ်တယ် ... ။
ယုံကြည်ပါ .. မှန်တယ်လို့ ထင်မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိသလို အားရပါးရ ယုံကြည်ခွင့်လည်းး ရှိပါတယ် ...။
ဒီအခွင့်အရေးက "လူ" ဆိုတဲ့ သတ္တဝါမှာပဲ ရှိတာလေ ... ။
ယုံကြည်ရာ တခုခု မရှိခဲ့ရင် ... မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းကြားမှာ အချိန်အပိုင်းအခြားက သိပ်ကြီးမားမယ်မထင်ဘူး ...။
ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်ကြောင့် ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို မှန်တယ် ထင်သူချည်းပါပဲ ....။
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းရေ ....
ုကိုယ်ယုံကြည်ရာက သူတပါးရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေရုံနဲ့တော့
အချင်းမများပါနဲ့။ အခင်အမင်မပျက်ပါစေနဲ့။ သွေးစွန်းနေ့တွေ မပေါ်ပေါက်ပါစေနဲ့။ မိသားစုတွေ မပြိုကွဲပါစေနဲ့။ မိဘမဲ့နဲ့ ဒုက္ခိတတွေ မတိုးပွားပါစေနဲ့လား .... ။
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ကွဲလွဲစွာ ယုံကြည်ကြရအောင်ပါ ....။
အမတ ငယ် |7:27 PM, 08/04/2012|
1 comments Labels: ကိုယ့် အတွေး တပိုင်းတစ ..., နှင်းဆီတစ်ပွင့် အကြောင်း
လျော့လွန်းပြန်တော့ ပတ် တဲ့ ...
ဘယ်လို မလျော့မတင်းအခြေနေမျိူးမှာ ကိုယ်နေရမလဲ .....။
အတင်းအလျော့လည်း မလုပ်ချင်ပါဘူးကွယ် ...
မင်းက ကိုယ့်အတွက် စွန် တခုမှ မဟုတ်ခဲ့တာ ....။
ကိုယ့်မှာ ရစ်ဘီးလည်း မရှိခဲ့ဘူး ... မရှိချင်ခဲ့ဘူး ချစ်သူ .... ။
ဆွဲခေါ်မှ ပြန်လာချင်သူကို ကိုယ် မလိုချင်ခဲ့ဘူး ..... ကိုယ် မလိုချင်ဘူး ... ။
ပေးလိုက်တည်းက တစုံတရာကို မျှော်လင့်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ ... ။
ကိုယ်ဟာ သစ်ပင်တပင်ပါ ....
ပျံသန်းပါ ချစ်သူ ...
မောပန်းရင် နားခိုပါ ...
ကိုယ့်သစ်ပင်ရဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေက မင်းအတွက် တေးသံလေးတွေ ခြွေပေးပါလိမ့်မယ် ... ။
ကိုယ့်သစ်ပင်ရဲ့ အရိပ်က မင်းရင်ကို ချွေးတိတ်အေးမြစေပါလိမ့်မယ် ....။
ကိုယ့်သစ်ပင်ရဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေက မွှေးရနံ့လေးတွေနဲ့ မင်း စိတ်ကို လန်းဆန်းအားပြည့်စေပါလ်ိမ့်မယ် .... ။
ကိုယ်က ရာသီတိုင်း စိမ်းမြနေမယ့် အမြဲစိမ်းသစ်ပင်တော့ ဟုတ်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး ....။
မင်းရဲ့ တောင်ပံခတ်သံသဲ့သဲ့လေး ကြားလိုက်ရုံနဲ့
ရုတ်ချည်း စိမ်းစိုလန်းဆန်းနိုင်တဲ့ .. သီးသန့်သစ်ပင် ပါ ....။
2.4.2012 10:35 PM
1 comments Labels: ချစ်သူသို့ ....., ကျောင်းမတက်ခဲ့ဖူးသော ကဗျာများ, နှင်းဆီတစ်ပွင့် အကြောင်း
သာသနာရောင်ဝါထွန်းလင်းတဲ့ ငယ်တို့ မြေ.. ဘယ်ချိန် ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် လှနေတဲ့ ငယ်တို့ အမိမြေ
မြင်ဆရာ ၏ "သစ္စာ"
ငါ့စာဖတ်၍ ၊ မမြတ်တိုင်စေ
မရှုံးစေသား ၊ ပျင်းပြေနှစ်ခြိုက်
တွေးဖွယ်ထိုက်ရာ ၊ တစ်ပိုဒ်တစ်လေ
တွေ့ငြားပေမူ ၊ စာပေကျေးကျွန်
ငါ့ဝတ်ပွန်ပြီ ၊ ငါမွန်အမြတ်
ငါအတတ်ဟု ၊ စာဖတ်သူပေါ်
ခေါင်းကိုကျော်၍ ၊ ငါသော်ဆရာ
မလုပ်ပါတည်း ။ ။
( တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် )
အမတငယ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့..
ပေါက်ကရ40 ကို လာရောက်ဖတ်ရှုပေးတာ
ငယ့်ကို တိုက်ရိုက်ဝေဖန်အကြံပြု ချင်ရင် march.star9@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါရှင်...။ ပြီးတော့ ငယ့်ကို ဂျီတော့မှာ အတ်ထားရင် အတ်ထားကြောင်းလေး C box မှာ လာအော်ပေးပါရှင့်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ငယ်က ဘယ်သူမှန်းမသိရင် accept မလုပ်ဖြစ်လို့ပါ...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...။
၆ လလောက် ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ ဘာလုပ်လို့လုပ်နေမှန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းသိပါဘူး ....
ငယ် အကြိုက်ဆုံး online radio
စင်ကာပူ ITE အကြောင်းသိချင်ရင်....
တရားတော်အခွေများ စာအုပ်များ လိုချင်ရင်...
ကိုလင်းလင်း (Asian Traveler)
မမနှင်း ( နှင်းနဲ့မာယာ )
ကိုစည်သူ (ပေါက်ကရအတွေးအပိုင်းအစများ )
တယ်ရင်း နောင့် ( ရေးချင်တာလေးတွေ )
မောင်လေး ကိုထက် (လုလင်တစ်ဦး၏ အတွေးဆုံမှတ် )
ကိုရန်ကုန်သား (ရင်ခွင်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း)
တယ်ရင်း မေလေး (ဆုံနိုင်ခွင့် )
ကိုယုယ (“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”)
ကိုသားကြီး (ဒွေး မဟုတ်ပါ :P )
သာယာ ( Mr.Thar Yar Pwa Lay )
မကိ ( Idiotlove )
ချိုမြိန် ( ကျိုးပျက်ခဲ့သော နှလုံးသား ကာရံများ )
ဇူး ( ရင်မှ မိုးစက်ပွင့်များ )
မောင်လေး ဇေလေး (အနာဂါတ် ရဲ့လမ်းပြကြယ်)
နှင်းဆီတစ်ပွင့် အကြောင်း (7)
အခန်းဆက် ဒိုင်ယာရီ (6)
ကျောင်းမတက်ခဲ့ဖူးသော ကဗျာများ (6)
ကိုယ့် အတွေး တပိုင်းတစ ... (5)
ချစ်သူသို့ ..... (5)
တယ်ရင်းတို့ တဂ်ထားသမျှ (3)
ခုတလောလေ ....... (2)
ဖတ်မိသမျှ နဲ့ တွေးမိသမျှ (2)
သယ်ရင်းများရဲ့ the best များ (2)
ခုတလောလေ ......... (1)
အိမ်ဝေးနှင်းဆီ ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ. Template Design By: SkinCorner